Lawo BVE2019 မှာဗိုလ်မှူးကုန်ပစ္စည်းကြေညာချက်များလွှတ်တင်! NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - - အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ
Home » အသားပေး » Lawo BVE2019 မှာဗိုလ်မှူးကုန်ပစ္စည်းကြေညာချက်များလွှတ်တင်!
Lawoဂျာမန်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ရှေ့ဆောင်အိုင်ပီကွန်ယက်ထိန်းချုပ်မှု, အသံနှင့်ဗီဒီယိုနည်းပညာ၏ထုတ်လုပ်သူ, စတူဒီယိုနှင့်ဖျော်ဖြေအနုပညာ, ရွေးချယ်ထားပြီး 2019 BVE သူတို့ရဲ့ပြည့်စုံ IP ကိုဖြေရှင်းချက်အစုစုကိုမှဖြည့်စွက်, IP ကိုထုတ်လွှင့်ထုတ်ကုန်များအခြားအဓိကလွှတ်ပေးရန်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်ပြသပါ။ ဝေးလံခေါင်ဖျားထုတ်လုပ်မှု setup ကိုဧည့်သည်များသို့ရောနှောနေခြင်းအပေါ်တွေ့ကြုံခံစားရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်အသစ်ထုတ်ကုန် BVE တဲ #J30။ ထို့အပြင်ဒီထုတ်ကုန်ပစ်လွှတ်အတူ Lawo အရေးကြီးသောကော်ပိုရေးရှင်းသတင်းတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ launch နေ့စွဲ 26 မှာအင်္ဂါနေ့ဖေဖော်ဝါရီ 2019, 12 (မွန်းတည်) ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ setup ကိုပါဝါ CoreRP အဝေးမှအသံအင်ဂျင်, WAN-နိုင်စွမ်း A__line AoIP interfaces, နှင့် V__remote4 ဗီဒီယို Over-IP ကိုအလှူငွေဖြေရှင်းချက်ရောစပ်ဝေးလံခေါင်ဖျားဘက်ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းအသံလွှင့်ထုတ်လုပ်မှုခြမ်းတွင်, Lawo အဆိုပါ V__matrix ဆော့ဝဲ-သတ်မှတ်ထားသော IP ကို-Routing, ထုတ်ယူခြင်း & Multi-ကိုကြည့်ရှုခြင်းပလက်ဖောင်းက, SMART System ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်လက်ရှိအချိန်ပေးပို့စနစ်များအသံလွှင့်ကွန်ယက်နှင့် A__UHD Core Ultra-High-သိပ်သည်းဆကွန်ယက်ကို-based အပါအဝင်အသစ်ကmc²56 3rd မျိုးဆက်ကျောင်းသားများထုတ်လုပ်မှု console ကို, software- ပြ သတ်မှတ်ထားသောအသံ DSP အင်ဂျင်ကို။ ထို့ပြင် setup ကိုပုဘွန်ဒစ်လီဂါ-approved အနီးကပ်ဘောလုံးကိုရောစပ်မှုအတွက်ထိန်းချုပ်မှုရောစပ် automated, ကန်ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ V__matrix ဂေဟစနစ် ဆော့ဖျဝဲ-defined ရဲ့ Virtual မော်ဂျူးများ (VM က) လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖန်တီးရန် loaded ထားတဲ့အပျေါမှာယေဘုယျမြင့်မားတဲ့စွမ်းရည် FPGA-based အပြောင်းအလဲနဲ့ဓါးသွားပေါ်မှာအခြေခံသည်။ ကမ္ဘာ့ 64st အပြတ်အသတ်ချဲ့စစ်မှန်တဲ့အိုင်ပီမြင်ကွင်းစုံနှင့် vm__UDX - - 4K format နဲ့ converter ကို VMs အား၏အကွာအဝေးဟာ vm_dmv1-4 ပါဝင်သည်။ အကွိမျမြားစှာ cores ့အမွေ baseband matrix ကိုများကဲ့သို့ဘောင်-တိကျမှု, သန့်ရှင်း switching ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဖြန့်ဝေသည် IP လမ်းကြောင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ matrix ကိုဖွဲ့စည်းတစ်ခုက IP ကွန်ယက်မလိုအပ်တဲ့ 40GE (သို့မဟုတ် 4x10GE) Ethernet interface တွေကိုမှတဆင့်ချိတ်ဆက်နေကြသည်။
Lawo'' s ကို SMART အကွာအဝေးဟာလည်းပါဝင်သည် smartDASH System ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်လက်ရှိအချိန်ပေးပို့စနစ်များတစ် All-IP ကို, All-SDI ဒါမှမဟုတ် hybrid WAN / LAN ထုတ်လွှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်, smartSCOPE နက်ရှိုင်းသောအစုံလိုက်သုံး packet စစ်ဆေးရေး & Network မှ Analyzer, မီဒီယာ-Agnostic, High-density ကို 24 /7ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအနှံ့ကွန်ယက်နှင့်မီဒီယာမြင်ကွင်းအဘို့, ရောင်းချသူ-Agnostic စီးပွားရေးလုပ်ငန်း software ကို အိုင်ပီများအတွက်ပလက်ဖောင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေအတွက်စီးဆင်း။
အသစ်mc²56 (3rd မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ) ယနေ့ရဲ့ IP ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် optimized ဖြစ်ပါတယ် - ပေး Lawo'' s ကိုဗီဒီယိုတော်လှန်ရေးသမား LiveView thumbnail ကိုကြည့်ရှုနိုင်သောယင်း fader ချွတ်တိုက်ရိုက်စီး - ပြီးရှုပ်ထွေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက် networking များအတွက်မြေပြင်ကိုတက်ရာမှဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်များအတွက်အပြည့်အဝဇာတိထောက်ခံမှုနှင့်အတူ SMPTE 2110, AES67 / RAVENNA, Dante နဲ့ MADI အသံစီး။
A__UHD Core ကွန်ယက်-based, ဆော့ဖ်ဝဲ-defined အသံ DSP အင်ဂျင်ဖြစ်၏ > 1,000 အပြည့်အဝပေးထားသောmc² DSP လိုင်းများနှင့်အတူ၎င်း၏ Ultra-မြင့်မားတဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့သိပ်သည်းဆဖြစ်စေတောင်မှအများဆုံးစိန်ခေါ်မှုဘဏ်ဍာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသို့မဟုတ်လေးခု consoles စမှတက်နေဖြင့်ဝေမျှဘို့တစ်ခုတည်းmc² console ကိုအားဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်။ SFPs ရှစ်လွတ်လပ်သော 10 / 1GbE ကွန်ရက်အင်တာဖေ့ ST2022-7 ချောမွေ့စွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး switching (SPS) ကနေတဆင့်မလိုအပ်တဲ့ကွန်ရက်အသုံးပြုမှုကို enable ။ A__UHD Core စုစုပေါင်းရဲ့ကွန်ယက်ကို I / O စွမ်းရည် 40,000 48kHz / 24bit အော်ဒီယိုချန်နယ်ညီမျှ။ စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက်ယူနစ်နှစ်ခုမလိုအပ်တဲ့ RJ45 1GbE စီမံခန့်ခွဲမှုဆိပ်ကမ်းများပေးပါသည်။
အဆိုပါ Power က CoreRP စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် IFB ရောစပ်မှာ low-အောင်းနေချိန် On-site ကိုအသံအပြောင်းအလဲနဲ့ပေး, လေယာဉ်ပေါ်တွင် WAN-စွမ်းရည်နဲ့ဇာတိ IP ကိုပေး Audio I / O & DSP ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှု node ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစွမ်းထက် 1RU device ကို 48 အပြောင်းအလဲနဲ့ channel များကိုတပ်ဆင်ထားနှင့်mc² consoles စကနေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာရုပ်သံလိုင်း parameters တွေကို (Gain, Fader, အသံတိတ်, EQ, Dynamics ကို, aux စသည်တို့ကိုအဆင့်, Send) ၏ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။ ယင်း၏ Touch-screen ကို-optimized ထိန်းချုပ်မှု GUI ကို On-site များနှင့်ဝေးလံခေါင်သီစစ်ဆင်ရေးအပိုဆောင်းများအတွက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Power က CoreRP ကနေတဆင့်ကွန်ယက်ကို-link ကို redundancy ထောက်ပံ့ SMPTE 2022-7 ချောမွေ့စွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Switching ။
ကန် ဘောလုံးကိုထိုကဲ့သို့သောဘောလုံး, ရပ်ဂ်ဘီနှင့်အမေရိကန်ဘောလုံးအဖြစ်အားကစားဘို့နီးကပ်-ဘောလုံးကိုအသံပစ်ကပ်ဘို့အနည်းပညာခြေရာခံနေသည်။ အဆိုပါစနစ်အားသိသိသာသာလူအစုအဝေးဆူညံသံကိုလျှော့ချ, ပွင့်လင်းသောအသံများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ '' ကန်-to-ဆူညံသံ '' အချိုးပေးပါသည်။ ဒါဟာအစကိုက်ညီဖို့ပွဲစဉ်ကနေ 100% ပြန်လုပ်သည်နှင့်ပင်ကစား 90 မိနစ်အကြာတွင်အလွန်အမင်းတိကျဖြစ်နေဆဲတစ်ဦးရောနှောပို့ဆောင်တစ်ထုတ်လွှင့်ရောနှောအတွက်ချောမွေ့စွာပါဝင်များအတွက်သိသာ်လည်းကြွေတတ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးတသမတ်တည်းအသံ level ကိုသေချာ။ အားလုံးဘွန်ဒစ်လီဂါဘောလုံးပွဲထုတ်လုပ်တာဝန်ရှိသည်, DFL (ဂျာမန်ဘောလုံးလိဂ်အစည်းအရုံး) လက်အောက်ခံ Sportcast အကောင်းဆုံးကစားလယ်ပြင်ပေါ်အရေးယူမှတ်တမ်းတင်သောမိုက်ခရိုဖုန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကစားသမားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှခြေရာခံခြင်းများအတွက် 2017 / 2018 ရာသီကတည်းကအားကစားထုတ်လုပ်မှုကန်သုံးပြီးခဲ့ပြီး အသံရောထွေး - လုံးဝအသစ်သို့နှင့် "အနီးကပ်-to-The-ပွဲ" အသံကခံစားနေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားပရိသတ်ကိုအတူ။
Lawo ဒီဇိုင်းများနှင့်တိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ပြဇာတ် applications များအဖြစ်, ထုတ်လွှင့်နဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ရှေ့ဆောင်ကွန်ရက်ထိန်းချုပ်မှု, အသံနှင့်ဗီဒီယိုနည်းပညာကိုထုတ်လုပ်တယ်။ ကုန်ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စနစ်များ, consoles စ, router များ, ဗွီဒီယိုအပြောင်းအလဲနဲ့ tools များအဖြစ်အိုင်ပီ-based A / V ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် routing ကိုစနစ်များများအတွက်ဖြေရှင်းချက်ရောစပ်ဒီဂျစ်တယ်အသံစောင့်ကြည့်ပါဝင်သည်။ အားလုံးထုတ်ကုန်ဂျာမနီမှာဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် Rastatt, ဂျာမနီ၏ရိုင်းချိုင့်ဝှမ်းမြို့မှာကုမ္ပဏီ၏ဌာနချုပ်တွင်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အပိုဆောင်းအချက်အလက်များအတွက်မှာအွန်လိုင်းကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.lawo.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor MStar post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-02-18
ယခင်: တိုက်ရိုက် WEBINAR - မတ် 26: အမြင့်-Demand ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်စိန်ခေါ်မှုများ်ဆောင်မှုများမျက်နှာ
နောက်တစ်ခု: ဂရေဟမ် Media Group သို့အတူဝါရှင်တန်ပို့စ်ရဲ့ Arc ထုတ်ဝေရေးလက္ခဏာများ